ịkụ nzọ Strategies | Express Sports & cha cha ịkụ nzọ | Ndenye & oru oma Access
ịkụ nzọ Strategies – Nọgidenụ Gịnị ị Mmeri na Sports.expresscasino.co.uk
Olee mgbe ị na-eche na okwu bụ 'uru player' esetịpụ ezi? Bụghị mgbe na ụwa nke egwuregwu ịkụ nzọ, m na-ekwu.
Ọtụtụ n'ime anyị ndị na-ekwu na onye ọ bụla nzo na a sports uru na njedebe nke ụbọchị dị ka ogologo oge dị ka ha na-egwu ugboro ugboro na ogologo oge.
Nke a adịchaghị ezi.
Anyị niile maara na bookmakers mgbe niile nwere ihu n'elu egwuregwu, ma jide isi na-egwuri egwu kaadị. Ọ bụrụ na naanị na e nwere ụzọ ka ọbuná ọnu, igwu egwu mma na square; Ọ bụrụ na naanị player nwekwara uru ọ bụla mgbe a na mgbe.
Ọfọn, ịmara ezuru; e nwere ụzọ! A ọma na atụmatụ ịkụ nzọ dị aghụghọ nwere ike inye gị na onu.
Ebe a bụ a lee anya na otu n'ime ndị kasị mkpa akụkụ nke elu ịkụ nzọ azum. M na-guessing ị maara ụzọ gị gburugburu isi, n'ihi na elu ego spinning ịkụ nzọ azum bụ maka egwuregwu bụ ndị na na na na a mere baptizim baa na azụmahịa na ha isi nri.
Understanding echiche dị otú ahụ dị ka na-atụ anya uru (EV)
Tụrụ anya uru (EV) bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa azum na ịkụ nzọ azụmahịa. Ọ bụ ya mere ọ na anya na ọ na-anọgide a ugboro ugboro ji atụmatụ ke ịkụ nzọ idaha.
Ka anyị tụlee otu ihe atụ ịghọta nke a ọzọ coherently.
Ka anyị kwuo na ị na m na-ekpebi nwere a egwuregwu nke basketing bọọlụ- ọma, M pụtara n'ụzọ nkịtị! N'ihi na ọ bụla bọl na ị nkata, M na-ekweta akwụ gị $1. N'otu aka ahụ, maka ọ bụla bọl na m nkata ị na-akwụ m $1.
Ịkụ nzọ Strategies Blog Will n'Ihu Mgbe Daashi Isiokwu n'okpuru
ugbu a, anyị nwere ike basketballs maka ihe nwere ike iyi gị ka mgbe ebighị ebi ma ka na-enweghị-eto eto. Nke a bụ n'ihi na iwu nke averages abịakwasị elu na nke ọ bụla $1 M na-eme m ejedebe adịkwa ya fọrọ nke nta ozugbo. Nke a nzọ na-ekere na-anọpụ iche uru nke ọgwụgwụ N'ihi nwere ike na-atụ ohere nke swinging ma ụzọ
Ugbu a ka tinye a dị iche iche akụkụ ya; ka na-ekwu na ị na-ike gwụrụ nke basketing bọọlụ na họrọ ịkwụsị egwuregwu. ugbu a, M na aka nke ọzọ na-eche na m na-inching kwupụta a mmeri na isi mmeri. M n'ụzọ ụfọdụ jikwaa ka kwenye na ị na-anọ na-egwu maka ogologo site n'ikwere na-akwụ gị ihe ọzọ 50 cents ọ bụla bọl ị nkata. ị Otú ọ dị, arapara gị ịkụ nzọ dị aghụghọ na-anọgide na- akwụ m $1 ka kwetara tupu.
Rịba ama otú e a na mberede mgbanwe na-emegide. E ọ bụla ohere na ị nwere ike ime ka $1.50 na ida naanị $1.00 na nloghachi. Ị mere na-erite uru site 50 cents ọ bụla 1 anwa gị ịga nke ọma. Nke a na-emepụta a mma na-atụ anya (+EV) nke 50 cents. Otú ọ dị, dị ka onye na-akwụ m na nke a ego, M ejedebe na-ata ahụhụ a na-adịghị mma na-atụ anya uru (-EV) nke 50 cents. n'ihi na ihe ịga nke ọma ịkụ nzọ, na-elekwasị anya kwesịrị irite ma nweta + EV nzo ma zere -EV tụfuru.
Ịkụ nzọ Strategies Blog maka Sports.expresscasino.co.uk. Nọgidenụ Gịnị i nweta!